Tababare Solskjær oo ammaanay Pogba kaddib markii ay Man United u soo baxday wareega Siddeeda ee tartanka Europa League – Gool FM
Tababare Solskjær oo ammaanay Pogba kaddib markii ay Man United u soo baxday wareega Siddeeda ee tartanka Europa League
(Milano) 19 Maarso 2021. Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ammaanay xiddiga kooxda ee Paul Pogba, kaasoo ku hoggaamiyay Red Devils inay ka gudbaan caqabadii naadiga AC Milan, iyaga oo u gudbay wareega siddeed dhamaadka tartanka UEFA Europa League.
Manchester United oo iska xaadirisay wareega siddeeda Europa League kaddib markii ay guul kaga gaartay AC Milan 0-1 kulankii lugta labaad wareega 16-ka, Red Devils ayaa cel-celis ahaa ku soo baxday labada kulan 2-1, maadaama kulankii lugta hore uu ku soo dhamaaday barbardhac 1-1 ah.
Shabakada “BBC Sport” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær, kaddib ciyaarta waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Aad ayaan u faraxsanahay dabcan. Waxaan ka gudubnay kulankii adkaa ee aan la ciyaarnay koox fiican waxaana ka soo gudubnay dhibaatooyinka qaar.”
Ole Gunnar Solskjær ayaa ammaanay goolhayihiisa Dean Henderson, kaddib bandhigii cajiibka ahaa uu sameeyay kulankii AC Milan, wuxuuna yiri:
“Waxaad siineysaa naftaada fursad aad ku guuleysato kulammada marka aad shabaqaada ilaashato, Dean Henderson ayaa sameeyay badbaadin weyn.”
Intaas kaddib Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu ammaan ugu qubeeyay Paul Pogba kaddib markii uu ku hoggaamiyay kooxdiisa guusha ay ka gaareen AC Milan wuxuuna yiri:
“Waan u xiiseenay Paul, wuxuu maqnaa ku dhowaad labo bilood, koox kasta oo adduunka ka mid ahna wey tabi doontaa ciyaaryahan sida Pogba oo kale ah.”
Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray: “Isagu waa ciyaaryahan aad muhiim noogu ah, wuuna na siin doonaa dhiirogalin weyn, isbedel ayuu sameynayaa, aad buu noogu weyn yahay.”
Man United oo iska xaadirisay wareega siddeeda ee tartanka Europa League kaddib markii ay guul ka gaartay AC Milan… +SAWIRRO
Muxuu Stefano Pioli ka yiri kaddib guuldarradii kooxdiisa AC Milan ka soo gaartay Manchester United?